Sigaar cabista uurka waxay leedahay cawaaqib xun
Mucaarid la'aanta sigaar cabista xilliga uurka
Khatarta kansarka oo kordhay maaha kaliya hooyada sigaar cabista
Si buuxda uga fogow sigaarcabka xilliga uurka
Marka loo eego tirakoobka, qiyaastii boqolkiiba sicirrada sigaarcabku wali waxay isticmaalaan sigaarkooda bilowga uurka. Kuwaas waxaa ka mid ah, nus ka mid ah iyaga ayaa maamula in ay gacmahooda ka ilaaliyaan iftiinka dhalaalaya bilaha ugu horreeya ee uurka. Sigaar cabidda xiliga uurka waxay leedahay saameyn aad u xun.
Cabitaanka sigaarka - waxaa jira cawaaqib xun
Si kastaba ha noqotee, ilaa boqolkiiba 15, si kastaba ha ahaatee, qabatinka nikotiinka ayaa go'aaminaya wax badan nolol maalmeedka ah inay waxyeello u geystaan ​​ilmahaaga.
Sigaarka cabitaanka uurka waa tabo!
Qodobada ugu horreeya ee xafaayadda ayaa muujinaysa xajinta sigaarka hooyada xilliga uurka
Sida meconium - ama ururinta sidoo kale sidoo kale Kindspech - wuxuu ciribtiraa kursiga kowaad ee dhalashada ka dib, kaas oo uu ka soo baxo ilmaha. Foomamkaas horeba waxaa laga sameeyay bilaha afaraad ee uurka. Waxay ka kooban tahay xitaa qaraha waaweyn, unugyada xuubka xabka iyo liqidda amniotic, kuwaas oo ku jiri kara raadadka unugyada maqaarka iyo timaha.
Cilmi-baaris ayaa sidoo kale muujisay in ay sidoo kale ogaan karto wasakheeyaha iyo maadooyinka daroogada ee la isticmaalay intii lagu jiray bilihii 6 ee uurka. Si kastaba ha ahaatee, faahfaahin faahfaahsan oo ku saabsan qadarka qiiqa ah ee hooyadu u soo gaadhay xiliga uurka ma suurtagali karto.
Sida laga filayo, dhakhaatiirta iyo khabiirada si adag ayaa looga digay sigaarcabka waqtiga uurka. Gaar ahaan, koritaanka ilmaha caloosha ayaa daciif ah iyo khatarta ah in la soo daayo ama, kiiskii ugu xumaa, dhicin ayaa la kordhiyaa si joogto ah. Intaas waxaa sii dheer, halista ah cilad-xumada sida xubinta taran ama xubnaha jirka ayaa la kordhiyaa.
Waxaa intaa dheer, waxaa la caddeeyey in carruurta ku dhasha sigaarka sigaarka uurka leh ay kudhacaan celcelis ahaan 200 grams oo ka fudud sidii caadiga uurka. Tani waa sababta oo ah, sababtoo ah sigaar-cabista, maraakiibta dhiigga hooyadood ayaa cidhiidhi ah.
Sidaa daraadeed, bixinta xarigga xundhurta ayaa ka sii daraysa ilmuhuna wuxuu helayaa nafaqo yar yar iyo oksijiin la siiyo, taas oo saameyn xun ku leh koritaankiisa iyo horumarkiisa. Intaa waxa dheer, halista infekshin dambe ama dhimashada ilmaha waa qiyaastii laba jeer oo ka sareysa.
Daraasado ayaa muujiyay in sigaar-cabista haweenka uurka leh ay gaari karaan 13 maalinkiiba marxalado jilicsan. Xannibaadda muddada uurka caadiga ah ee sagaal bilood, waxay taasi keentaa siga 3600. Haddii xitaa kiimikada 4000 ku jirto qiiqa sigaarka, kuwaas oo qayb ahaan kansarka iyo suntan, waa la tixgeliyaa, waxay noqon kartaa wax xun.
Xaqiiqda ah in dadka sigaarka cabba ay qaadaan khatar aad u kordhay badanaa kansarrada badan ayaa la og yahay. Laakiin ilmahaaga lagu meeleeyo sigaarka inta ay uurka leedahay, dhagax aasaas u cudur ka dib kansarka. In la eego daraasad by German Cancer Research Center in reer hooyooyinka sigaarka sigaarka inta ay uurka leedahay, ama ku saabsan mid ka mid ah jeer 1,5 badan tahay kansarada oo ka mid ah kaadiheysta iyo mareenka sare. In kansarka sanbabada, waxa ay ku saabsan 1,7-laab iyo xataa saddex laab kansarka sanka.
Sidaa darteed, gabagabadu waxay noqon kartaa in haweenka uurka leh ay tahay inay gabi ahaanba joojiyaan sigaarka. Tani ma aha mid ku habboon ilmaha oo aan dhalan. Hooyadu waxay sidoo kale awood u leedahay inay aragto saameynta wanaagsan ee joojinta sigaarka kadib saacado yar kadib. Sidaa darteed, ka dib daqiiqado 20, hoos u dhaca cadaadiska dhiigga iyo garaaca wadnaha ayaa la arki karaa. Mudo sideed saacadood gudahood, heerka qandhada carbon monoxide ee dhiiggu horay buu u dhacaa. Tani waxay sidoo kale u fiirinaysaa ilmaha si degdeg ah, sababtoo ah hadda waxay helaysaa qiyaasta ku filan ee oksijiin iyo nafaqooyinka.
Si kastaba ha noqotee, sigaarka mamnuucidda sigaarka, qolalka dagan ama saaxiibada nolosha iyo ragga ragga uurka leh waa inaysan dareemin wax aan la diidin. Sidoo kale, sigaar-cabista sigaarka ee hooyadu waxay horayba u halis gelin kartaa cunugga uur-jiifka ah. Sidaa darteed, reerka haweenka uurka leh ku jiraa asal ahaan aan sigaar-cabin. Dabcan, sigaarka waa in laga fogaadaa xitaa markaad uur leedahay.
Jooji sigaarka caafimaadka
Midabaynta cunugga bogga uurka
Jooji sigaar-cabidda - joogso kuwa aan sigaarka cabbin
Jooji sigaarcabka adiga oo isticmaalaya hypnosis
Jooji sigaarcabka adiga oo aan calaamado ka soo bixin
Noqo aabe - uur ka soo roonaanta ninka